Adobe jilitaankii Pro bixisaa waddooyinkiisa oo kala duwan si ay u soo degida iyo dhoofinta videos. Halkan waxaan inta badan ay ugala hadlaan sida ay u dajiyaan oo files warbaahinta dhoofinta INT Adobe jilitaankii Pro.
Waxaa jira labo siyaabood ee dajiyaan warbaahinta galay Ciyaar, amarka soo dejinta iyo browser warbaahinta. Waxay wax u qabtaan si ka duwan wax yar oo ay leeyihiin isticmaalaa labadaba ay haboon yihiin, halkan waxaan ku eegi doonaa geeddi-socodka laftiisa iyo habka ay u isticmaalaan in xaalad siiyo.
Habka 1: Import Command
Kaasi waa amarkii toosanna ku shaqeeya sida barnaamijyada kale ee inta badan, oo waa la heli ka menu file ah, ama via Control + aan toobiye on PC ama Command + waan ku Mac ah. Waxaad sidoo kale laba jibaar karaa guji meel madhan, guddi mashruuca si toos ah loo furo wadahadal dejinteeda.
Si kasta oo aad u helaan, oo aad ka heli caadiga ah ee sanduuqa wadahadal dejinta madal aan halkaan ku arko.
Qaabkan Keenista ugu habboon isku-warbaahinta sida audio ama naqshadeynta, ama faylasha video sida MP4 in iyagana la files hal, oo meel on your computer aad si ogaan waxaad eegi kartaa iyaga si fudud. Tani habka ay u dajiyaan videos ka kamaradaha, sida ay wariyaasha ay abuuraan file iyo folder qabanqaabada adag in doorashada ka dhigi files sax adag ma aha. Tani waa halka aad ka dooran lahaa halkii habka warbaahinta browser.
Habka 2: Media Browser
Inkastoo warbaahinta dusha sare browser u muuqataa in ay sameeyaan shaqo la mid ah sida amarka dejinteeda sida ay u fuliyaan hawsha loo xoogaa kala duwan, browser warbaahinta waxaa loogu talagalay in aad aragto ha warbaahinta ay abuureen kamaradaha, oo wuxuu idin tusin fududahay in la fahmo walxood oo metadata halkii hannaankii sir ah ee files iyo fayl ay isticmaalaan. Taas ayaa ka dhigaysa gaaray clip saxda ah ka doorashada inta badan ka sahlan, la metadata aad muujinaya taariikhda iyo waqtiga iyo sidoo kale nooca file.
Guddida browser warbaahinta laga helo guddi mashruuca, taas oo ku saabsan qaabka caadiga ah waa geeska hoose ee bidixda, oo sidoo kale laga heli karaa iyadoo Shift + 8 toobiye ah. Sida aad ka arki kartaa shaashadda ay u shaqayso sida file browser nidaamka qalliinka ah oo kuu ogolaanaya in aad in ay dhex maraan tusaha file ah drives adag iyo warbaahinta saari xiran nidaamka ka.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ka mid ah browser warbaahinta waa inay hoos u soo koobto nooca warbaahinta la tusay, si aad u hagaajin karo in ay AVCHD tusaale oo wuxuu muujin doonaa nooca kaliya in file in meel la siiyo. Sababtoo ah mashaariic badan oo ay isticmaalaan warbaahinta oo laga helay ilo kala duwan waxa ay noqon kartaa boon dhab ah si loo helo file saxda ah gudahood liiska.
Browser Media bandhigayaa badan ama ka yar file kasta oo ay jirto in meel la siiyo, iyo Keenista si fudud waa arrin xulashada file saxda ah iyo labo gool waxa ay xaq u leedahay ama ilamaha gujinaya iyo xulashada dejinta ka menu. Waxaad dooran kartaa files duwan ee hal mar by haysta hoos wareeg iyo iyaga dajiyaan oo dhan wada haddii loo baahdo.
Waxaa jira qaar ka reebban in this, si kastaba ha ahaatee, inkastoo tiro badan oo ah noocyada file taageeray natively gudahood jilitaankii, aad mararka qaarkood doonaa files in aan la taageeray, files FLV iyo MKV iyagoo kuwa ugu badan, laakiin tani ma aha dhamaadka adduunka iyo uu jiro xal fudud.
Wondershare Video Converter Ultimate bixiyaa hab fudud si loogu badalo wax file waxaa laga yaabaa inaad galay warbaahinta in jilitaankii dhaqso ah oo waxtar u isticmaali karto, iyo waa qalab weyn oo ka garab Ciyaar u leedahay haddii aad caadi ahaan noocyada file badan shaqeeyaan.
Ujeedada kama dambaysta ah ee mashruuc kasta oo cad waa in la dhammeeyo iyo kuwa kale ha ku arko natiijada aad hal-abuurka, iyo in ka dhigan tahay dhoofinta shaqadaada qaab ah in uu ku haboon yahay dhexdhexaad ah ee aad rabto inaad mashruuca in loo arko on. Ciyaar waxay bixisaa dhowr ah oo ku saabsan fursadaha dhoofinta, waxaad dooran kartaa isku xigxiga oo dhan inay u dhoofiyaan sida file hal web ama disc, dooran jir hal to post in website-ka, blog ama email u qaybiyaan, aad dhoofin karo kaliya audio ah , ama kaliya video laga soo gelayo, iyo haddii aad haysato qalabka saxda ah, si toos ah ama cajalad disk dhoofin karo.
Si aad u dhoofiyaan mashruuc in si dhow ula kulan warbaahinta asalka ee heerka tayada iyo jir, inta badan loo yaqaan nuqul Masterka, waa mid aad u sahlan in jilitaankii, la isku xigxiga ee la doortay, ama ay Timeline Panel ama Panel Mashruuca, si fudud aad u isticmaali File> dhoofinta ah > Media Jid:
Waa kuwee furmay wadahadal dhoofinta warbaahinta.
Doorashada 'Match iskugu xigxigaan Settings "halkan abuuraa file a in la dhammeeyayna ay kulan tayada ilaha warbaahinta asalka. Markaas si fudud aad doorato magaca ku haboon faylka duurka Output Magaca, oo guji dhoofinta. Tani waxay abuurtaa in nuxurka Gadzhiyev oo ah digital ah isugu xigaan, iyo ku dhaqanka ugu fiican waa in had iyo jeer ay tan u sameeyaan mashruuc kasta, si kastaba ha ahaatee, mashaariicda badan, tani waa daruuri ma aha qaabka aad rabto in aad wax soo saarka lahaa ee kama danbaynta ah ee noqon, kuwa ku mashquulsaneyd saarka YouTube , ama qof doonaya in ay yihiin qorayaasha DVD ah oo tusaale ahaan u baahan doontaa fursadaha kale.
Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin jilitaankii halkan loogu talagalay sidoo kale. Halkii xulashada 'Match iskugu xigxigaan Settings "gudahood wadahadal la dhoofiyo, waxaad riixi kartaa oo ku saabsan' Qaabka 'beerta in la beddelo nooca file oo la soo saaray. Waa maxay fursadaha halkan kala duwanaan karaan ku xiran tahay codecs lagu rakibay, shaashadda tani waxay muujinaysaa in kuwa ka mid ah la soo saarka ee la caddeeyo oo kaliya.
Iyadoo ku xiran oo qaab aad doorato. Horena hoose waxay kuu ogolaaneysaa in aad doorato tiro balaadhan oo ah wax soo saarka goobaha si loo waafajiyo madal loogu talo galay. Tusaale ahaan, xulashada qaab H.264 ilaa tirada weyn ee presets u Alwaaxdii kala duwan iyo Phones, laakiin sidoo kale vimeo iyo YouTube, taas oo ah sababta ay u tahay mid ka mid ah qaabab wax soo saarka ugu badan. Halkan eegno qaar ka mid ah presets la heli karo ka menu.
Marka aad doorato horena ah, waxaad dheeraad ah ka beddeli kartaa oo xuduudaheedu ku habboon mashruuca aad ka shaqeeya iyo xitaa badbaadiyo kuwa sida horena caadadii dheeraad ah oo mashaariic ka dib waa in aad rabtid. Mar kale, doorashada magac file ku haboon oo gujinaya dhoofinta dhamaado nidaamka.
Ayaa looga baahan yahay kale ee caadiga ah waxaa loogu talagalay DVD ama Blu-Ray files. Inkastoo aad u baahan tahay in ay helaan qalabka ku habboon si ay u gubaan disk ah, jilitaankii abuuraa qaab-dhismeedka file u ah in natively iyo aad leedahay laba fursadood halkan. MPEG2 in labada DVD ama foomka Blu-Ray, ama H.264 Blu-Ray. Iyada oo ilaha tayo sare leh, labada qaabab waa shiidaa indistinguishable in ay qaab final, si kastaba ha ahaatee, MPEG2 noqon doonaa inta dhakhso u Gudaan iyo doorasho wanaagsan ee codsiyada ugu badan. Inkastoo H.264 wuu kuu fasaxayaa in content ka badan in ay ku habboon meel siin, oo sidaas daraaddeed waxay leeyihiin isticmaalka. Keenista iyo dhoofinta waxaa aasaas u ah isticmaalka jilitaankii, iyo sida aynu ayaa muujiyey Ciyaar ka dhigayaa mid aad u fudud in la sameeyo oo soo saarta noocyada file midig wax alla wixii mashruuc ay tahay in la isticmaalo.
Iyadoo dheer ee Wondershare Video Converter Ultimate aad leedahay aalada ah in liqi karo iyo dhoofin nooc kasta oo file warbaahinta aad waligaa ku arki doonto iyadoo ugu yar ee loo buunbuuninayo.
> Resource > Video > Sida loo soo dejinta iyo dhoofinta Videos ee Adobe jilitaankii